L'Oreal Paris Smooth Intense Anti Frizz Serum (Argan Oil) - 100 ml | Buy online | SHOP.COM.MM
L'Oreal Paris Smooth Intense Anti Frizz Serum (Argan Oil) - 100 ml
Leaves hair feeling up to4times smoother
For up to 48 hours protection
Argan Oil nourishes hair and calms frizz
L'Oreal က Serum လေး ကိုသုံးပြီး ဆံပင်ရှုပ်တာတွေကိုသက်သာစေလို့အရမ်းကြိုက်ပါတယ် Read more Hide
နဂိုဆံပင်ကြမ်းတဲ့ညီမတောင် ဆံပင်ပျော့သွားလို့အရမ်းသဘောကျတယ် ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းပုံမှန်လိမ်းဖြစ်တယ် Read more Hide
Khin Yu Ya Win
ဆံသားကိုပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေတဲ့ခေါင်းလိမ်းဆီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
ညီမဆံပင်ကသင်္ကြန်ပြီးထဲက တော်တော်ပျက်စီးသွားတာ။ L'Oreal ကယ်မှပဲ နည်းနည်းပြန်သက်သာလာတယ်။ တော်တော်ကြိုက်သွားပြီး ဒီ Hair serum လေးကို။ Read more Hide
L'Oreal Serum လေးက ဆံသားကို၎ဆပိုမိုချောမွေ့နူးညံ့စေလို့ အရမ်းသဘောကျတယ်။ Read more Hide
Smooth Intense Anti Frizz Serum is enriched with Argan Oil that leaves hair smooth, fluid and manageable for up to 48 hours protection. The formula nourishes your hair from root to tip, renewing its texture and shine. Suitable for damaged hair touched by chemicals and sun exposure.
Specifications of Smooth Intense Anti Frizz Serum (Argan Oil) - 100 ml